एक आधारभूत मानव आवश्यकता को - संचार र पहिचानको लागि आवश्यक। हामी लजालु व्यक्ति केही समस्या poses कुराकानी गर्न आवश्यक छ। अन्य के स्वाभाविक उहाँलाई लागि एउटा मुद्दा बन्नेछ। यो नयाँ मान्छे संग सम्पर्क स्थापित गर्न, सहयोगको लागि सोध्नु असुविधाजनक छ, यो समाजमा रहेको बलियो कठोरता र असजिलोपन महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अचाक्ली लाज वयस्क र दुवै हो बच्चाहरु। को उमेर सुविधा केही अवस्थामा बच्चालाई एक स्थिर विशेषता मा उत्तेजित गर्दछ।
एक बच्चा किन नहट्न गर्छ?
हुनत यो सम्पत्ति को प्रकटीकरण को डिग्री अलग-अलग छन् सबै सन्तानको वृद्धि र विकास केही अवधि मा, लजालु छन्। उदाहरणका लागि, बालिका केटाहरू भन्दा लजालु बढी सम्भावना छन्। यो आफ्नो लिङ्ग र शिक्षा सुविधाहरू कारण हो। कहिलेकाहीं छोराछोरीलाई "लजालु" उमेर outgrow र प्रकृति नै रहनेछ। वयस्क आफ्नो आँखा उठाउनु वा आफैलाई लागि केहि लागि सोध्नु डर Preschooler। वर्ग मा आफ्नो हात जुटाउने स्कूल को विद्यार्थी संकोच, को किशोरी विपरीत सेक्स को साथीहरूको, असफलता को डर संग भेट्न हिम्मत गर्दैन। आमाबाबु र मित्र बच्चा किन धेरै लजालु छ जान्नु आवश्यक र कसरी उसलाई मदत गर्न।
उमेर 8 महिना मा, बच्चाहरु मनोवैज्ञानिक जायज परिपक्वता चरण छ कि एक "अपरिचित को डर" अनुभव गर्न थाल्छन्। बच्चाहरु अघि शान्तपूर्वक हात मा हिड्ने कसको नातेदार र परिचितहरू, तिनीहरूले अक्सर निराश छन्। चिन्ता नगर्नुहोस्, र अलार्म ध्वनि - यो लजाउने छैन। त्यसैले बच्चालाई आफ्नो स्वतन्त्रता महसुस गर्न सुरु, माथि बढ्छ।
एक बच्चा तीन वर्ष वर्ष देखि एक नजिक र परिचित भरोसा गर्नुहुन्छ। अपरिचित उहाँलाई फिक्री र असजिलोपन कारण। बच्चा किन लजालु छ को प्रश्न, बच्चाहरु को आमाबाबुले ख्याल गर्दैन। आमा र बुबा उसलाई पढ्न र, आफ्नो उपस्थिति र सहयोगमा चिप्स भरोसा instilling आफ्नो नयाँ वातावरणमा आफूलाई अनुकूल गर्न सिकाउनुभयो।
तीन वर्ष या त पछि, सबै भन्दा बच्चाहरु किंडरगार्टन धाउन थाल्छन्। शान्तपूर्वक स्थिति प्रयोग प्राप्त केही बच्चा, एक बिट प्रारम्भिक अन्य आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्न। त्यहाँ कारण आफ्नो चरित्र र शिक्षा को peculiarities गर्न सुविधा ख्याल गर्ने बिल्कुल contraindicated सम्म केटाहरु र केटीहरु छन्। एक लजालु बच्चा नयाँ स्थिति को लागि - तनाव। तिनीहरूको आवश्यकता व्यक्त गर्न कसरी मदत माग्न भने एक शिक्षक एक (वा दुई), र बच्चाहरु को धेरै?
हालैको एउटा टुकडा स्कूल गए? त्यो त उच्च विद्यालय मा एक किशोरी हुन्छ, उसले आफ्नो डेस्क मा बस्छन पहिलो पटक हो। धेरै स्पष्ट संयम र यो उमेर मा हिचकिचाहट बच्चा पीडित छ सुझाव। यो स्वभाविक र गतिविधि हुन गाह्रो छ, प्राप्त अन्य बच्चाहरु थाह। "कुनै" भन्न वा आफ्नो मा जिद्दी गर्न कठिन। अन्य र निर्भरता को प्रतिनिधित्व भिज्न आवश्यकता आफ्नो आकलन आफ्नै क्षमता विकास र व्यक्तिगत व्यक्तिको पेशा लागि खोज बाधा मा।
एक बच्चा, कसरी आमाबाबुले मेरो छोरा वा गहिरो सास रोक्छ कि नकारात्मक अनुभव हटाउन छोरी मदत गर्न सक्छ आफ्नो अनिश्चितता र डर बोल्न सक्छन् बारेमा पनि लजालु छ भने के गर्ने? म त्यो प्रकृति द्वारा लजालु छ यदि बच्चा "पुनर्निर्माण" गर्न प्रयास गर्न आवश्यक छ? यी प्रश्नहरूको सधैं चिन्तित आमाबाबुले गरिएको छ। वर्ण, स्वभाव, पालनपोषण, वातावरण, वातावरण घर र यति मा: तिनीहरूलाई जवाफ मामूली को व्यक्तिगत विशेषताहरु मा निहित। सकेसम्म एक daze मदत, तर आमाबाबुले मुख्य कुरा बुझ्नुपर्छ: बच्चा हितमा हदसम्म तिनीहरूलाई निर्भर गर्दछ।
"आफैलाई छन् ..."
गठन भित्री विश्वास धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ। नम्रता र लजाउने को जन्मबाट प्राप्त स्वभाव को एक प्रकटीकरण वा जो एक सानो मानिस बसोबास परिवार वातावरण प्रभाव द्वारा निर्धारित हुन सक्छ। काँतर आमाबाबुले एक brisk र Mischievous छोरा को सपना, र तिनीहरूले एउटा लजालु बच्चा बढ्छ छ। आमाबाबुले डरलाग्दो छन् र कसरी आफूलाई लागि खडा थाहा छैन भने कारण, स्पष्ट लजाउने हो, कसरी अठोट को crumbs भेला सक्छ?
नियन्त्रण वा permissiveness
नियन्त्रण आमाबाबुले अक्सर अत्यधिक strictness र शिक्षा गर्न authoritarian दृष्टिकोण अनुवाद। बच्चा जुनूनी ध्यान र हेरविचार घेरिएको छ, आफ्नो हरेक चरण जाँच गरिन्छ। यस प्रकारको र गर्व आमाबाबुले बाह्य मूल्यांकन मा उन्मुख छन्। सबै भन्दा राम्रो, आफ्नो साँचो भित्री वयस्क चासो छैन को दुनिया हुन आफ्नो बच्चा। सट्टा समानुभूति - आलोचना र मूल्याङ्कन। बरु साँचो चासो को - प्रगति र अन्य बच्चाहरु को क्षमता को सङ्केत गर्छ।
नियन्त्रण को विपरीत पक्ष अत्यधिक भोग छ। स्पष्ट सीमाहरु को कमी र भावनात्मक समर्थन को कमी - यसको मुख्य विशेषताहरु। यस्तो "शिक्षा" को परिणाम प्रधान नियन्त्रण बाट ड्रिल परिणाममा अत्यन्तै यस्तै छ। बच्चा, आफूलाई कमजोर र नगण्य देख्नुहुन्छ भोगिरहेका छ दोषी को भावना। नियन्त्रण आमाबाबु र pandering बाबु आमा शैली संग वयस्क दुर्भाग्यवश, तिनीहरूले शायद कारण आफूलाई छ भन्ने महसुस, बच्चा किन लजालु छ को प्रश्न फिक्री हुन सक्छ, तर।
"अनि तिनीहरू यहाँ, अवस्थाको छन् ..."
हामी पनि प्रभाव हाइलाइट गर्नुपर्छ एक dysfunctional परिवार। सायद, यस्तो सम्बन्धित वातावरण त्यहाँ हिंसा छ, वा आमाबाबुले रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था बाट ग्रस्त छ। विकल्प धेरै छन्। यस्तो परिवार देखि बच्चाहरु दुनिया सुरक्षित छैन भन्ने विश्वास गर्छन् र तिनीहरू असल सम्बन्ध योग्य छैन। आफ्नो जीवन र विषाक्तता को आफ्नो परिवारको लागि असजिलोपन लाज मा कम बनाउँछ। साथै, एक स्वस्थ संरचना को गठन "म" जो आमाबाबुको हराएको वा धेरै प्रारम्भिक आमा अलग गरिएको छ ती बच्चाहरु को खतरा छ।
आफ्नो बच्चा लजालु ... आमाबाबुको लागि सुझाव छ भने
हामी बच्चा गर्न दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नजिक र मदत भरोसा सम्बन्ध। यो कुराकानी प्रविधी प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ सक्रिय सुन्न को र "म-बयान।" यो आवश्यक छैन कुनै पनि कारण लागि बच्चा पराउँछु छ, तर वास्तविक, पनि सानो उपलब्धि लागि हामी प्रशंसा गर्नुपर्छ। यसलाई जिम्मेवार व्यापार सुम्पिन्छु र आफ्नो कार्यान्वयन को लागि धन्यवाद दिन उपयोगी छ। तपाईं वयस्क को बच्चा को अगाडि छ भने पनि, आदर बोल्न आवश्यक छ। तपाईं बच्चा आफ्नो आवाज उठाउनु र अन्य बच्चाहरु संग तुलना गर्न सक्दैन। , नै महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै त आफ्नो आत्म-सम्मान बलियो बनाउन सुरु निश्चित गर्न तिनीहरूलाई।
पुर्खाहरूले अक्सर आमाहरू आफ्नो बच्चा लजालु बढ्छ कि चिन्ता भन्दा पनि अधिक हो। "म के गर्नुपर्छ?" - तिनीहरू विशेष गरी यदि हामी केटा बारेमा कुरा गर्दै छन्, सोध्नुहोस्। Dads छोराहरू साहस र अठोट अनुरोध मा देखा वा हुनेछ वयस्क हुनेछ बुझ्न आवश्यक छ। यस्तो गुण को गठन को लागि प्रकृति, एक बच्चा अभिभावकको समर्थन आवश्यक छ। पिता सधैं समर्थन हुन कायरता लागि उहाँलाई गाली गर्छन्, र सुरक्षा गर्न, आफ्नो बच्चाहरु को छेउमा हुनुपर्छ। त्यसपछि बच्चा बिस्तारै आफ्नो लजाउने हटाउन र भविष्यमा साहसी र बोल्ड, पिताजी जस्तै हुनेछ।
प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तित्व अद्वितीय छ। बच्चाहरु कुनै अपवाद छन्। आमाबाबुले गल्ती, समय र ऊर्जा बर्बाद साना मान्छे "remake" बनाउन। उहाँले आफ्नै तरिका छ किनभने कहिल्यै ठीक त्यही आशा, हुनेछ। बुद्धिमान् आमाबाबुले आदर्श बच्चा को सपना कदर छैन, तिनीहरूले आवश्यकता थाहा र जब तपाईं यो आवश्यक उद्धार गर्न आएको, आफ्नो वास्तविक छोराछोरीलाई ध्यान हो। तिनीहरूले थाहा बच्चा किन लजालु वा अचाक्ली सक्रिय, यसको सुविधाहरू कुनै पनि रूपमा उत्तरदायी छ। फूल पनि मित्रता र भरोसाको वातावरण खुला, त्यसैले वयस्कहरूको लागि मुख्य सल्लाह - गम्भीर र आदरपूर्वक बच्चाहरु बुझाउँछ। र आफ्नो हात मा आफ्नो आनन्द र राम्रो-भइरहेको भूल छैन।
मैत्री मनोवृत्ति: गठन र विकास
"मान्छे" को अवधारणा: व्यक्तित्व को परिभाषा
एक मित्र को Compliments, र मात्र
कसरी डराउन रोक्न
रूपमा चाँडै सकेसम्म अपार्टमेन्ट बेच्न? अचल सम्पत्ति बजार को रहस्य
लेखकहरूले, storytellers - जादू जादुगर
पहाड प्यतिगोर्स्क: नाम र फोटो
डेटाबेस - एक जटिल प्रणाली
स्की रिसोर्ट्स (क्रिमीआ): फोटो, सुविधाहरू
पाहुनाहरूको को सीमा मा? पनीर संग खाना पकाउने tortillas